Sunday September 08, 2019 - 09:00:54 in Wararka by Super Admin
Sarkaal lagu magacaabi jiray Edward Bagonza oo ka mid ahaa kaaliyayaasha Taliyaha AMISOM qeybta booliska ee ka howlgala gobolka Banaadir ayaa Meydkiisa laga helay qol konteennar ka sameysan oo ku dhaxyaal xerada Xalane.
qaabka loo dilay taliyahan faah faahin dheeri ah lagama bixin balse Col. Grace Turyagumanawe oo kamid ah saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa maalintii shalay xaqiijiyay in meydka Edward Bagonza laga helay qolkii uu ka deganaa xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada Midowga Afrika ku leeyihiin Soomaaliya.
Wararka ayaa intaas ku daraya in sarkaalka meydkiisa lahelay uu u dhashay dalka Uganda kana mid ahaa ciidamada AMISOM kuwa magaca boolis ku jooga dalka Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay AMISOM qeybta booliska wuxuu shalay sheegay in ay qaban qaabinayaan qaabkii ay munaasabad aas ah ugu sameyn lahaayeen sarkaalka halaagsamay balse ma sheegin halka lagu aasi doono.
Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dowladaha Burundi iyo Uganda ayaa wajahaya xaalad nafsaani ah oo aad u daran waxaana loo aanaynayaa diifta iyo dhibaatada ay kala kulmayaan dagaalka daba dheeraaday ee ka socda dalka Soomaaliya wax ka badan 12 sanadood oo xiriir ah.
Billaawgii sanadkan ayay saraakiil sarsare oo katirsanaa taliska ciidamada Uganda waxay isku daldaleen gudaha Xerada Xalane, weerarada joogtada ah ee xoogga Al Shabaab ku qaadaan saldhigyada ciidamada Midowga Afrika ayaa sababay dhimashada kumanaan kun oo askari